'Vanga vachirwa kudaro kubva vachiri vadiki' - WWE Nhoroondo Rikishi paRoman Reigns uye nenyaya yeUso - Wwe
WWE Universal Champion Roman Reigns uye vazukuru vake Iyo Usos ndiyo yaive nzvimbo yekutarisisa yeWWE SmackDown kubvira Iyo Tribal Chief yadzokera kukambani muna Nyamavhuvhu apfuura. Sekureva kwaRikishi, baba vaJimmy naJey Uso, yavo yepa-screen storyline inoyeuchidza mazuva avo ehudiki sevana.
wwe pasi pekutora uye kane
Mukupera kwegore ra2020, Kutonga kweRoma kunetsana nehama yake Jey Uso yeWWE Universal Championship. Iwo ma superstars akatarisana nekaviri, uye maReigns akakunda ese maviri nguva. Jey akapedzisira awira mumutsara uye achienderana neRinotonga, uye Jimmy achangobatana nemauto.
Munguva yekuonekwa kwake kwazvino ku Simbi Guta Comic Con , WWE Horo yeNerer Rikishi akagovana pfungwa dzake pane yese 'Ropa' nyaya.
'Zvakanaka, kutanga kwezvose ndinodada navo [The Usos & Roman Reigns],' akadaro Rikishi. 'Isu tinoziva kwavanobva, iropai ravanomiririra uye nevakomana ava pano neveRoma, vese vakadzidziswa zvehunyanzvi uye kuti vakwanise kuona nhengo dzemhuri yako musoro weSmackDown, musoro wenyaya WrestleMania, musoro wenyaya Muvhuro Manheru Raw, chinhu chakanaka , kudada kwatiri, nekuti vakapinda mukati menguva mushure meiyo Yokozuna ine simba. Kana imi varume musina kuwana mukana wekuti muone zvakanakisa zvinyorwa izvo WWE yakaisa pamwechete paYokozuna ane simba, zviongorore. '
'Asi, vakomana ava vanouya kubva kumhuri yekumashure kwedu, kubva kumhuri iri kubva kuUmaga kuenda kuYokozuna, The Rock, ndinoreva kuti rondedzero inoenderera uye kugona kuona vana vako uye muzukuru wako kunze uko vachizviita kunze uko uye vachimiririra uye kuibata pasi, chinhu chakanaka, 'akawedzera. 'Ini ndinofunga nyaya dzenyaya dzavari kupfuura nazvino, ndinofunga dzakanaka. Haisi nyaya, ndizvo chaizvo ivo. Vanga vachirwa kudaro kubva vachiri vana kuseri kwemba. Uye ikozvino kugona kuita izvozvo pa-kamera uye nekubhadharwa nezvayo, ndingati chinhu chakanaka. Samoan Dynasty iri kukunda. ' (H / T. POST Kurwira )
Rikishi akaendeswa muWWE Hall of Fame neiyo Usos mu2015. Zvichakadaro, baba veVatongi veRoma baba Sika nababamunini Afa veVanowira Samoans vakaratidza kutsigira Kutonga kuWWE Hell muSero gore rapfuura.
Kutonga kwevaRoma uye Iyo Usos ndiyo inonyanya kukosha chikamu cheWWE SmackDown
Kutonga kwevaRoma uye Jimmy naJey Uso
Kutonga kwevaRoma kwave kuri pane kumhanya kwakanyanya pane iyo bhuruu brand. Shanduko yake kuva Tribal Chief yaive shanduko yaidikanwa yeVatongi, uye yakauya panguva yakakosha apo WWE yaida nyeredzi yepamusoro yekutungamira iyo SmackDown brand munguva yedenda.
Kutonga ndicho chitsitsinho chikuru mukambani, uye ane mumwe weakanakisa mavara muindasitiri yewrestling izvozvi. Mushure mekukunda Rey Mysterio kuchengetedza Universal Title mukati meGehena muSero Chishanu chapfuura, vateveri vanofanirwa kumirira kuti vaone izvo WWE zvakaronga zvinotevera kuRoman Reigns.
'Zuva Rababa Rakanaka.' - @WWeromanReigns #SmackDown #UniversalTitle #HIAC @reymysterio @HeymanHustle pic.twitter.com/eGyGwoYs73
- WWE (@WWE) Chikumi 19, 2021
Iwe unofungei nezve zvakataurwa naRikishi? Rira pasi pazasi.
Mhoro! Kana iwe uri kushingaira pa Instagram, ndokumbirawo utiteverewo :) @kwrestling_
zvinhu zvekudanana zvekunyora mutsamba
kuziva sei musikana anokufarira chaizvo
sei bonde richinzi kuita rudo
ane mapfumo aBritney ane mwanasikana